Hoggantoonni Taalibaanii fi Afgaanistaan nagaa buusuu danda'u laata? - BBC News Afaan Oromoo
Hoggantoonni Taalibaanii fi Afgaanistaan nagaa buusuu danda'u laata?
Waggaan dura tibba waliigalteen dhukaasa dhaabuu hineegamiin taasifameetti, humnootiin Afgaanistaanii fi Taalibaan ayyaana Isilaamaa Iiid kabajuuf qawweesaanii lafa kaa'anii turan.
Gareewwan waliin mari'achuuf walitti dhiyaatan kunneen akka waan gara nageenya waaraatti dhiyaatanitti yaaduu laata?
Waxabajjii bara 2018 keessaa guyyoota sadiif namoonni wal ajjeessaa turan nageenyaaf wal hammachuun waliin suuraa ka'an.
Haalli sunis adeemsa nageenyaa bu'aa qabeessa ta'ee akka eegalamuuf gargaareera.
Ameerikaan Afgaanistaanitti lammiilee nagaa 23 ajjeeste
Haayaatullaah haayaat, bulchaan manda Naangaarhar yeroo sanaa, kanneen riphee loltootaan wal arganii turan keessaayi.
Innis hiriira waloo kan motummaafi kan miseensota Taalibaan alaabaa biyyattii kan halluu diimaa, magariisa fi gurraacha akkasumas mallattoo riphee loltootaa adii qabachuun ogganuun gara magaalaa Jaalaalaabaad geessee ture.
"Loltoota Taalibaan 230 masaraa kiyyaatti simadheera, wayita seenanis tokkoonsaanii illeen hin sakkata'amne," jechuun boonaa dubbate.
Mr Haayaat yeroo baay'ee haleellaa Taalibaanotaan irratti aggaamame irraa hafeera. Waggoota muraasa keessatti hirriyyoota isaa gara 50 ta'an walitti bu'insichaan dhabeera jedheera.
Jalqabarratti keessummoonni isaa 'wayi na miidhuu laata' jechuun yaadda'usaas hindhoksine.
"Akka dhuunfaatti, yaadeera,'' jedheera. Garuu ''nageenyi ummata Afgaanistaaniif barbaachisaa ta'usaa waanan amaneef balaa qabaatuus ''osoodhuman du'eyyuu'' jechuun raawwadheera,'' jedhu.
Waggoota shanan darban keessattis miseensonni humna nageenyaa 45,000 ajjeefamaniiru. Garuu konfaransii galma olaanaa keessatti Mr Haayaat fi hirriyoonni isaan loltoota Taalibaan isaan hammachuuf hiriira galanii dhaabbatan hedduu argan.
Isaan keessaa loltuu dargaggeessi akka hinqabne sodaachuun maqaansaa ''Khanjar'' jedhamee waamamu barbaade tokkotu ture.
Innis akka BBC'tti himeetti, ''Guyyicha lapheedhuma gammachuutiin nagaa Iid waliif qoodnee ture. .. Bulchaas hammadhee nageenya dhaameefiira.''
Duraan garuu kan wal argan adda waraanaa qofarratti ture.
Goodayyaa suuraa Mr Haayaat loltuu taalibaan ''Khanjaar'' hammatee
Har'a bulchaa sana kan argatu osoo ta'ee maal irratti raawwachu akka danda'u shakkii homaa hin qabu: ''Osoo hoggantoonni keenya hayyama nuuf kennanii, harka nan fuudha ta'a. Garuu, akka waraannu yoo nutti himanis nan waraana.''
Battaluma walii galteen waraana dhaabuu taasifameen yeroo gabaabduun booda, mariin nageenyaa Taalibaanii fi Ameerikaa jidduutti Qaatariitti eegalame.
Kunis bakka garee kun waajjira siyaasaa qabaniidha. Hanga har'aattis gareen riphee loltootaa bakka bu'oota motummaa Afgaan kan aangoo hin qabne ittiin jedhan waliin wal arguu didaniiru.
Haa ta'u malee guyyaa Dilbataa, irra deebiin mariin keessoo Afgaan Qaataariitti gaggeeffamuuf. Walgahiin kunis Taalibaanotaa fi bakka bu'oota qondaaltoota siyaasaa Afgaan irratti hirmaatu jedhamee eegama.
Akkasumas bakka bu'oonni mootummaa olaanoonis irratti qooda fudhatu kan jedhame. Garuu, mootummaa bakka bu'anii osoo hintaane 'ofumaan' akka hirmaatan himama.
Mr Haayaat bara darbee tibba waliigaltee dhukaasadhaabuutti wayita miseensota Taalibaan arganiitti, attamiin akka lola dhaabuusaanii ibsan gaafatanii ture.
"Sababiin isaan wayita sanatti kennanii tures, humnootii idil addunyaa jiraachuu qofa ture... Anis yoo nuti nageenyaafi waliigaltee irra qaqqabne, humnootiin idil addunyaa akka gadhiisan itti himeera.
Isaan kan asi jiraniif sababii jireenyi Afgaanotaa fi addunyaansi sababii Afgaaniin balaa jalatti kufeefi,'' jedhaniiru.
Isaanis attamiin yaada kanaaf deebiisanii?
"Isaanis murtee kammiiyyuu taasisuu hindanda'an. Kunis, hooggantoota isaanii waliin marii taasifamu qabaata,'' jechuun deebiisaniif. Garuu inni akka jedheetti, hanga humnootiin idil addunyaa bahaniitti loluu ittuma fufu.
Mr Haayaat wanti inni jedhee akka yaada garee waraana Taalibaanotaa walgahiichaa irra turanii irratti dhiibbaa taasisee yaadu.
Akkasumas deeggartoota mootummaatiifis barnoota ture jedhu. Keessattuu kanneen garee ollaa Tajaajilawwan Tika Paakistaan bakka bu'oota to'ataniif ergaa gariidha jedhu.
''Dhukaasa dhaabuun dura, Afgaanoonni hedduun akka Taalibaanoota waliin wal bira hingeennyeetti yaadu turan.
Guyyoonni sadan sunis Taalibaanoonnis qaama hawaasa kanaa akka ta'aniif isaan waliin jiraachu akka dandeenyu mul'isaniiru,'' jedha.
Mr Haayaat miseensoonni Taalibaan gariinsaanii garaa garummaa ejjannoo 'ilaalcha siyaasaa' qabaachu akka danda'anis ni amanu. Ta'us ammoo %90 loltoota isaanii hawaasa keessatti waliin jiraachu akka danda'an ni amanu.
Goodayyaa suuraa "Khanjar" aeenyummaansaa akka ifa hintaaneef BBC gaafate
Khanjar, loltuun Taalibaan yaada isaa geeddaruun bulchaa waliin wal arguudhaaf walgahicha irratti hirmaachuuf ganaa hinmurteessine.
Qondaaltoota mootummaa fi deegartoota isaanii 'obbolaa musilimaa keenya' jedhee ibsuuf baayyee rakkata.
Haa ta'u malee, erga bulchaa waliin wal argeen booda dhumarratti, akka itti yaaduu eegale hima.
''Gocha Ameerikaanoonni akka obboloota keenya Musilimoota waraannu nu taasisuuf nuti gammadoo miti. Garuu, hanga motummaan aangoorra jiru ergamtuu Ameerikaa ta'eetti waraanuun dirqama keenya,'' jedha.
'Kianjar' walitti bu'iinsi akka dhaabbatuu barbaadaa jira.
''Ani mataan koo waraana nuffeerra,'' jedheera. ''Garuu ammas keessuman jira. Dhiisuu hin danda'u... hojii kiyya. Hangan lubbuun jiruuttis warra gananiifi jidduu gala waliin waliin waraana.''
Afgaanistaaniitti ammalleen jeequmsi itti fufee jiraatulleen guyyoonni nageenyaa muraasni suun ammoo Mr Haayaatiifi Afgaanoota baay'eef, akka nageenyi guyyaa tokko uumamuuf qalbii ol kaaseefiira.
''Nageenyaafi waliif dhiisuun alatti daandii biraa homaa hinqabnu,'' jedha. ''Jecha qabna kan akkas jedhu: 'Dhiiga dhiigni hindhiqu.'''
Hongeen Afgaan 'waldhabdee Taalibaan caalaa namoota qe'eerraa buqqisaa jira'
Waraana Afgaanistaan : haleellaa qilleensaa US taasifteen namooti 23 ajjeefaman jedhe Mootummoti Gamtoomanii